Home/ Health & Living/पिसाबको रंगले बताउँछ रोग : कस्तो पिसाबसे के रोग बताउछ ? जानी राखौँ
काठमाडौँ — हाम्रो शरीरको फोहोर, काम नलाग्ने विकार पिसाबको माध्यमले प्राकृतिक तवरले बाहिर निस्किन्छ । पिसाबको रंग र यसमा हुने परिवर्तनले समेत हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिबारे संकेत दिन सक्छ ।
यदि तपाईंको पिसाबको रंग पारदर्शी पहेंलो छ भने तपाईंको स्वास्थ्य ठीक रहेको बुझ्नुपर्छ । तर गाढा पहेंलो रंगको पिसाब आए सतर्क हुनुपर्छ । यो तपाईंको कलेजोसँग जोडिएको समस्याको संकेत पनि हुन सक्छ । यति मात्र नभई रगतको कमीको संकेतको रूपमा समेत यो अवस्था देखिएको हुन सक्छ ।
पिसाबको रंग पहेंलो हुनुले तपाईंको शरीरमा पानीको कमीको संकेतसमेत गर्छ । यदि तपाईंले कम पानी खानुभएको छ भने पर्याप्त मात्रामा पानी खानुस् । स्वत: स्वाभाविक रंगमा फर्कन्छ । तर पानी खाँदासमेत रंग पहेंलो नै रहे चिकित्सकीय सल्लाह आवश्यक हुन्छ ।
गाढा खैरो रंगको पिसाबले कलेजोको समस्या वा जन्डिसको संकेतसमेत गर्छ । यस्तो समस्या लामो समयसम्म देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकीय सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
यस्तै, रातो रंगको पिसाब आएमा टयुमर वा मृगौलाको पत्थरीजस्ता रोगको संकेत हुन सक्छ ।
यस्तो स्थितिमा पनि तुरुन्तै चिकित्सकीय सहयोग आवश्यक पर्छ । सामान्य रूपले आफूले चाहिए जति पानी नखाने स्थितिमा पिसाबको रंग पहेंलो देखिए आत्तिनु हुँदैन । दिनहुँ आफूलाई उपयुक्त रहेको मात्रा अनुसार नियमित पानी सेवन गर्दा यसको रंग आफैं स्वाभाविक हुन्छ ।
चुनावी सभामा आत्मघाती आक्रमण हुँदा १२८ को मृत्यु
११ केजी सालकको खपटा र चाँदीको गहनासहित एक जना पक्राउ
कसरी बच्न सकिन्छ ग्यास्ट्रिक बाट ?
एक रात नसुत्दा कति असर पर्छ मानिसलाई, सबैले जानी राखौँ
कहिले काहि तपाईको टाउको फुट्ला जस्तो गरेर दुख्छ भने यो तरकाबाट घरेलु उपचार गर्नुहोस ५ मिनटमै ठिक हुन्छ